Shirkad Imaaraati ah oo ”Gaas ka baaraysa” Somaliland (Arrin aan kasoo ogaanney) | Hadalsame Media
Home Arrimaha Caalamka Shirkad Imaaraati ah oo ”Gaas ka baaraysa” Somaliland (Arrin aan kasoo ogaanney)
Shirkad Imaaraati ah oo ”Gaas ka baaraysa” Somaliland (Arrin aan kasoo ogaanney)
(Hargaysa) 01 Juun 2020 – Somaliland ayaa kaddib dhicitaankii Dowladdii Ciidamada waxay 1991-kii si halhaleel ah ugu dhawaaqday inay ka goosatay Somalia inteeda kale, balse weli cidina ma aqoonsan.
Yeelkeede, Maamulka Hargaysa ayaa se dunida si caadi ah ula xiriira, waloow aan dhankaa horumar badani ka imanin maadaama ugu yaraan sharciyan ay Somaliland weli ka tirsan tahay Somalia, waxaase beryihii dambe la xirtey Imaaraadka Carabta oo ah dal qalaanqal iyo qaybin ka wada inta badan dunida Muslimka.
Shirkad Imaaraati ah oo saldhigata Imaaradda Ra’sal Khaymah lana yiraahdo RAK Gas, ayaa bishii Maarso ee 2014-kii waxay Somaliland la saxiixatay heshiis inay gaas kaga baarayso halkaasi.
Waxayna 5 sanadood kaddib bartamihii 2019-kii halkaa ka bilowday sahan heer hoose ah oo ay ka samaysay qaybaha galbeed ee Somaliland, gaar ahaan baloogga SL9.
Yeelkeede, marka laga soo tago inaysan RAK Gas lahayn sharciyad ay shidaal uga soo saari karto Somaliland waqti xaadirkan, misna markii aannu baarnay muggeeda iyo khibradeeda dhanka baarista waxa qura waa inay Zanzibar heshiis kula gashay inay gaas ka baarto, mana helin dal ama meel kale oo ay horay shidaal uga baartay, iyada oo ay shaqadeedu u badan tahay suuq gaynta iyo qaybinta gaaska Imaaraadka.
Waxay sidoo kale sheegataa inay shidaal ka baarto Masar iyo Malawi, balse abid waxba kama soo saarin. RAK Gas ayaan sidoo kale ka mid ahayn camaaliqooyinka caalamka ee caanka ku ah arrimaha sahminta gaaska.
Previous articleDAAWO: Booliiska New York oo sameeyey arrin kale oo shacabka kasii caraysey!
Next articleAqalka Cad oo xalay cabsi laga dareemay & nalalkii oo uu dansadey + Sawirro & Muuqaal